Kenya oo soo iibsaneysa Gaadiid ay kula dagaalanto Al-Shabaab - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Kenya oo soo iibsaneysa Gaadiid ay kula dagaalanto Al-Shabaab
Kenya oo soo iibsaneysa Gaadiid ay kula dagaalanto Al-Shabaab
Ciiddanka Difaaca Kenya ee (KDF) ayaa waxaa ka baaraan degayaan Qandaraas ay Turkiga kaga iibsan doonaan Gawaarida Gaashaaman iyo gaadiid kale ee dagaalka, si loogu adeegsado dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Ciiddanka KDF waxaa la sheegay inay ka fekerayaan dhowr Xulasho oo kala duwan si ay u iibsadaan Gaadiidka Cusub ee Gaashaaman oo ay ku jiraan gaadiidka dhulka ee Turkiga ee ay soo saarto Shirkadda Turkishka ee Otokar.
Shirkadda Turkishka ee Otokar waxay dhawaan Heshiis la saxiixatay dal Afrikaan oo aan la carabaabin si looga iibiyo Gaadiidka Gaashaaman ee Arma 8×8 iyo Gaadiidka kale ee Gaashaaan ee Taayarada leh.
Kenya waxay kaloo ka baaraan-degaysaa inay iibsadaan Gaadiidka Gaashaaman ee ay soo saaraan Wershadaha dalalka Reer Yurub, sida Excalibur, Mowag iyo Piranha.
Dowladda Kenya ayaa waxaa Soomaliya kajooga Ciidamo ku howlgalla Magaca howgalka Midowga Affrika ee AMISOM, waxaana ay dagaal kula jirtaa Ururka Al-Shabaab.
Previous articleDowladda Imaaraadka oo Somalia u soo diraysa Diyaarado sida Gargaar
Next articleMareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Kenya